နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးေ တွကို လွယ်လွယ်ကူကူပြောမယ် – XB Media Myanmar
နေ့စဉ်ပြောဆိုနေကြ စကားလေးတွေကို အထာကျကျ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောတတ်ဖို့က အခြေခံကျတဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ စကားပြောမှာ ပြောင်းသုံးလို့ရပုံကို သိစေဖို့ အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပါယ်တူတဲ့ ဝါကျလေးတွေကို လေ့လာကြပါ။ ဝါကျတွေကို အသံထွက်ဆိုပါ။ ထပ်ခါ ထပ်ခါ အသံထွက်ဖတ်ပြီး အလွတ်ရအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ မကြည့်ဘဲ ပြောနိုင်သလား …သွက်လက်စွာ အလွတ်ပြောနိုင်ပြီလား ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။
That is really an effective way for you to practise to speak English fluently.
ဒါလေးများ လွယ်လွယ်လေးပါကွာ။ မခက်ပါဘူး။
– It’sapiece of cake. – It’s easy as pie.
(မြန်မာစကားမှာ ငှက်ပျောသီး အခွံနွှာစားသလို လွယ်ကူလွန်းတယ်လို့ ပြောသလို အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ ကိတ်မုန့် ပိုင်းမုန့်လေး စားရသလို လွယ်တယ်တဲ့)
– It’s not rocket science.
– I could do it with my eyes shut.
(တခုခုမပြောခင် ကိုယ့်ကိုနားလည်မှုမလွဲအောင် ဝါကျအစမှာ စပြောပုံ)
– Please don’t misunderstand me, but….
– Don’t take this the wrong way, but….
– You must understand that…..
– The decision is yours.
– I will leave it to you.
You want to stay or leave? It’s up to you.
နေချင်နေ သွားချင်သွား၊ မင်းသဘောပဲ။
ပြဿနာမဟုတ်။ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်စရာမဟုတ်။ အေးဆေးပါ။
– No big deal.
– No biggie.
– Please repeat what you just said.
– Pardon? ….ဆိုပြီးမေးခွန်းမေးသလို အသံမြှင့်ပြီး rising tone လေးနဲ့ပြောပါ။
– Come again. (ဒါလည်း ဘာပြောလိုက်တာလဲ၊ မကြားလို့ပြန်ပြောခိုင်းတာ။ ထပ်လာပါလို့ ဘာသာမပြန်ရ။ informal ဆိုတော့ ရင်းနှီးသူတွေနဲ့ပြောရင်သာ သုံးပါ။)
(sorry ကတော့ အကောင်းဆုံး အရိုးရှင်းဆုံးတောင်းပန်ပုံပါ။ စိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ရိုးသားစွာ I am sorry. လို့ပြောရင် တဖက်လူက လက်ခံမှာပါ)
– I am so/very/extremely/terribly sorry.
(ပေးထားတဲ့ sorry ရှေ့က adjective တစ်ခုခုကိုထည့်ပြီးပြောတော့ တောင်းပန်တာ ပိုလေးနက်တာပေါ့)
– It’s all my fault.
– My bad. (စကားပြောမှာ အရမ်းအသုံးများတယ်)
– How careless of me! (ငါကိုယ်က နမော်နမဲ့)
– I shouldn’t have + V3
– (I shouldn’t have said that. မပြောသင့်ခဲ့
– I shouldn’t have done that. မလုပ်သင့်ခဲ့ဘူး)
– Please accept my apologies. (တောင်းပန်တာ လက်ခံပေးပါ) ဒီဝါကျလေးက formal ဖြစ်ပေမဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့အတွက် သုံးသင့်ပါတယ်။ apologies ဆိုပြီး အများကိန်းနဲ့ သုံးရတာသတိပြုပါ။
မလုပ်ပါဘူးလို့ ကတိပေးတယ်။ (promise not to…)
– I promise not to tell anyone.
– I promise not to hurt your feelings.
လုပ်မယ်လို့ ကတိပေးတယ်။ (promise to…)
– I promise to call you when I get back.
– I promise to wash the car this afternoon.
နောက်တော့ လုပ်မယ်/မလုပ်ဘူးကို that သုံးပြီးကတိပေးပုံ (promise that……)
– I promise that I will study harder.
– I promise you that I will never drink again.
– I promise you that I won’t do that again.
Surprise အံ့သြကြောင်း ဘယ်လိုပြောမလဲ။
သတင်းကောင်းကြားရလို့ဖြစ်စေ၊ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ရလဒ်ကောင်းတခုခုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်အတွက် သူငယ်ချင်းတွေက ပျော်အောင် အံ့အားသင့်သွားအောင် တစ်ခုခုစီစဉ်ထားလို့ဖြစ်စေ…ကျေနပ်ကြောင်း ဝမ်းသာအံ့သြကြောင်းပြောပုံ။
– Wow, I can’t believe it. This is great.
ဝိုး၊ မယုံနိုင်စရာပဲ။ ကောင်းလိုက်တာကွာ။
– This is suchanice surprise. Thank you so much.
– Incredible, I never expected it.
မယုံနိုင်စရာ၊ လုံးဝ မမျှော်လင့်ထားခဲ့ဘူး။
– Wow, this is great. I appreciate this.
အိုး.. ကောင်းလိုက်တာ၊ ကြိုက်တယ်/ကျေးဇူးတင်/တန်ဖိုးထားတယ်။
– How awesome is this? I’m completely surprised.
တယ်မိုက်ပါလား။ တကယ့်ကို အံ့သြသွားတယ်။
(စကားပြောမှာ လူငယ်တွေက ကောင်းတာမှန်သမျှကို awesome လို့ပြောကြတယ်။ cool! ကိုလည်း အရမ်းသုံးကြတယ်။ သဘောကျရင် It’s cool! Cool! အဲလို တချိန်လုံးကြားရလိမ့်မယ်)
– Oh my gosh! You guys are great. Thanks for all of this.
ဘုရားရေ၊ မင်းတို့ဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ။ ဒါတွေအားလုံး လုပ်ထား ပြင်ထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်က သူများကို good news … သတင်းကောင်း တစ်ခုကို အသိပေးချင်ရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ။
(ရာထူးတက်တယ်၊ ထီပေါက်တယ်၊ စာမေးပွဲအောင်တယ်၊ လက်ထပ်တော့မယ်…စသည်ဖြင့် ဒီဝါကျလေးတွေမှာ သတင်းကောင်းတစ်ခုကို ထည့်ပြောပြီး လေ့ကျင့်ပါ။)
– I am really pleased to tell you….
(I am really pleased to tell you that I have been chosen forascholarship.
ငါ ပညာသင်ဆု အတွက်အရွေးခံရတယ်ဆိုတာ မင်းကို ပြောပြရတာ ဝမ်းသာတယ်)
– I have got (I’ve got) some good news to tell you…….
မင်းကို ပြောဖို့ သတင်းကောင်းလေးရှိတယ်။
– I have got (I’ve got) some great/ brilliant/ wonderful/ splendid news for you.
( good news အစား great; brilliant; wonderful; splendid စသည်ဖြင့် adjective တွေပြောင်းပြီးလေ့ကျင့်ပါ)
– Great news for you.
ကိုယ်က သူများကို bad news … သတင်းဆိုး၊ မကောင်းတဲ့ သတင်းပေးရမယ်ဆို ဘယ်လိုပြောမလဲ။
(စာမေးပွဲကျ၊ အလုပ်မရ၊ ရည်းစားနဲ့ကွဲ၊ accident ဖြစ်..စသည်ဖြင့် ဒီဝါကျလေးတွေမှာ unpleasant news လေးထည့်ပြီး လေ့ကျင့်ပါ။)
– I am afraid I’ve got some bad news for you.
မင်းကို သတင်းဆိုးတစ်ခုပြောရမှာ အားနာလိုက်တာ။
(I am afraid I’ve got some bad news for you. I’ve been fired.
သတင်းဆိုးပြောရတော့မှာပဲ။ ငါ အလုပ်ပြုတ်သွားပြီ။)
– I am sorry I’ve gotabit of bad news to tell you.
မကောင်းတဲ့ သတင်းလေးနည်းနည်းပြောရမှာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
– I really don’t know how to say it, but…..
– I am sorry to have to say this, but….
– I really feel bad to have to say this, but….
Speaking တတ်ချင်တယ်လို့ ပြောနေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေ…မရှက် မကြောက်ဘဲ ရဲရဲသာ အော်ဆို၊ အလွတ်ရအောင်ဖတ်…လေ့ကျင့် အသုံးချကြည့်ပါစို့။
နစေ့ဉျပွောဆိုနကွေ စကားလေးတှကေို အထာကကြ မွနျမွနျဆနျဆနျနဲ့ မှနျမှနျကနျကနျ ပွောတတျဖို့က အခွခေံကတြဲ့ အရေးကွီးတဲ့အခငျြဖွဈပါတယျ။ ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ စကားပွောမှာ ပွောငျးသုံးလို့ရပုံကို သိစဖေို့ အင်ျဂလိပျလို အဓိပ်ပါယျတူတဲ့ ဝါကလြေးတှကေို လလေ့ာကွပါ။ ဝါကတြှကေို အသံထှကျဆိုပါ။ ထပျခါ ထပျခါ အသံထှကျဖတျပွီး အလှတျရအောငျလကေ့ငျြ့ပါ။ မကွညျ့ဘဲ ပွောနိုငျသလား …သှကျလကျစှာ အလှတျပွောနိုငျပွီလား ကိုယျ့ကိုယျကို ဆနျးစဈကွညျ့ပါ။
ဒါလေးမြား လှယျလှယျလေးပါကှာ။ မခကျပါဘူး။
– It’s easy as pie.
(မွနျမာစကားမှာ ငှကျပြောသီး အခှံနှာစားသလို လှယျကူလှနျးတယျလို့ ပွောသလို အင်ျဂလိပျစာမှာတော့ ကိတျမုနျ့ ပိုငျးမုနျ့လေး စားရသလို လှယျတယျတဲ့)
(တခုခုမပွောခငျ ကိုယျ့ကိုနားလညျမှုမလှဲအောငျ ဝါကအြစမှာ စပွောပုံ)
နခေငျြနေ သှားခငျြသှား၊ မငျးသဘောပဲ။
ပွဿနာမဟုတျ။ ရေးကွီးခှငျကယျြလုပျစရာမဟုတျ။ အေးဆေးပါ။
– Pardon? ….ဆိုပွီးမေးခှနျးမေးသလို အသံမွှငျ့ပွီး rising tone လေးနဲ့ပွောပါ။
– Come again. (ဒါလညျး ဘာပွောလိုကျတာလဲ၊ မကွားလို့ပွနျပွောခိုငျးတာ။ ထပျလာပါလို့ ဘာသာမပွနျရ။ informal ဆိုတော့ ရငျးနှီးသူတှနေဲ့ပွောရငျသာ သုံးပါ။)
(sorry ကတော့ အကောငျးဆုံး အရိုးရှငျးဆုံးတောငျးပနျပုံပါ။ စိတျမကောငျးတဲ့မကျြနှာလေးနဲ့ ရိုးသားစှာ I am sorry. လို့ပွောရငျ တဖကျလူက လကျခံမှာပါ)
(ပေးထားတဲ့ sorry ရှကေ့ adjective တဈခုခုကိုထညျ့ပွီးပွောတော့ တောငျးပနျတာ ပိုလေးနကျတာပေါ့)
– My bad. (စကားပွောမှာ အရမျးအသုံးမြားတယျ)
– How careless of me! (ငါကိုယျက နမျောနမဲ့)
– (I shouldn’t have said that. မပွောသငျ့ခဲ့
– I shouldn’t have done that. မလုပျသငျ့ခဲ့ဘူး)
– Please accept my apologies. (တောငျးပနျတာ လကျခံပေးပါ) ဒီဝါကလြေးက formal ဖွဈပမေဲ့ ယဉျကြေးတဲ့အတှကျ သုံးသငျ့ပါတယျ။ apologies ဆိုပွီး အမြားကိနျးနဲ့ သုံးရတာသတိပွုပါ။
မလုပျပါဘူးလို့ ကတိပေးတယျ။ (promise not to…)
လုပျမယျလို့ ကတိပေးတယျ။ (promise to…)
နောကျတော့ လုပျမယျ/မလုပျဘူးကို that သုံးပွီးကတိပေးပုံ (promise that……)
Surprise အံ့သွကွောငျး ဘယျလိုပွောမလဲ။
သတငျးကောငျးကွားရလို့ဖွဈစေ၊ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ ရလဒျကောငျးတခုခုကွောငျ့ဖွဈစေ၊ ကိုယျ့အတှကျ သူငယျခငျြးတှကေ ပြျောအောငျ အံ့အားသငျ့သှားအောငျ တဈခုခုစီစဉျထားလို့ဖွဈစေ…ကနြေပျကွောငျး ဝမျးသာအံ့သွကွောငျးပွောပုံ။
ဝိုး၊ မယုံနိုငျစရာပဲ။ ကောငျးလိုကျတာကှာ။
မယုံနိုငျစရာ၊ လုံးဝ မမြှျောလငျ့ထားခဲ့ဘူး။
အိုး.. ကောငျးလိုကျတာ၊ ကွိုကျတယျ/ကြေးဇူးတငျ/တနျဖိုးထားတယျ။
တယျမိုကျပါလား။ တကယျ့ကို အံ့သွသှားတယျ။
(စကားပွောမှာ လူငယျတှကေ ကောငျးတာမှနျသမြှကို awesome လို့ပွောကွတယျ။ cool! ကိုလညျး အရမျးသုံးကွတယျ။ သဘောကရြငျ It’s cool! Cool! အဲလို တခြိနျလုံးကွားရလိမျ့မယျ)
ဘုရားရေ၊ မငျးတို့ဟာ သူငယျခငျြးကောငျးတှေ။ ဒါတှအေားလုံး လုပျထား ပွငျထားလို့ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
ကိုယျက သူမြားကို good news … သတငျးကောငျး တဈခုကို အသိပေးခငျြရငျ ဘယျလိုပွောမလဲ။
(ရာထူးတကျတယျ၊ ထီပေါကျတယျ၊ စာမေးပှဲအောငျတယျ၊ လကျထပျတော့မယျ…စသညျဖွငျ့ ဒီဝါကလြေးတှမှော သတငျးကောငျးတဈခုကို ထညျ့ပွောပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။)
ငါ ပညာသငျဆု အတှကျအရှေးခံရတယျဆိုတာ မငျးကို ပွောပွရတာ ဝမျးသာတယျ)
မငျးကို ပွောဖို့ သတငျးကောငျးလေးရှိတယျ။
( good news အစား great; brilliant; wonderful; splendid စသညျဖွငျ့ adjective တှပွေောငျးပွီးလကေ့ငျြ့ပါ)
ကိုယျက သူမြားကို bad news … သတငျးဆိုး၊ မကောငျးတဲ့ သတငျးပေးရမယျဆို ဘယျလိုပွောမလဲ။
(စာမေးပှဲကြ၊ အလုပျမရ၊ ရညျးစားနဲ့ကှဲ၊ accident ဖွဈ..စသညျဖွငျ့ ဒီဝါကလြေးတှမှော unpleasant news လေးထညျ့ပွီး လကေ့ငျြ့ပါ။)
မငျးကို သတငျးဆိုးတဈခုပွောရမှာ အားနာလိုကျတာ။
သတငျးဆိုးပွောရတော့မှာပဲ။ ငါ အလုပျပွုတျသှားပွီ။)
မကောငျးတဲ့ သတငျးလေးနညျးနညျးပွောရမှာ စိတျမကောငျးပါဘူး။
Speaking တတျခငျြတယျလို့ ပွောနကွေတဲ့ လူငယျလေးတှေ…မရှကျ မကွောကျဘဲ ရဲရဲသာ အျောဆို၊ အလှတျရအောငျဖတျ…လကေ့ငျြ့ အသုံးခကြွညျ့ပါစို့။